Ny "Coraline" an'i Neil Gaiman dia mahazo ny tranon'ny hazo mahatsiravina? - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Nahazo ny “Coraline” an'i Neil Gaiman ny tranon'ny hazo mahatsiravina?
Nahazo ny “Coraline” an'i Neil Gaiman ny tranon'ny hazo mahatsiravina?
by Waylon Jordan Septambra 22, 2017
nosoratan'i Waylon Jordan Septambra 22, 2017
Isan-taona, mpankafy ny The Simpsons ' andraso fatratra ny andiany mihetsika 'Halloween Extravaganza “Ny tranon'ny hazo mahatsiravina“. Nandritra ny taona maro, hitantsika ny zava-drehetra The mamirapiratra ny Harry Potter raiso ny fitsaboana Simpson, mamadika ny tantara mampatahotra mahazatra eo an-dohany amin'ny fihomehezana sy ny fo mitovy. Amin'ity taona ity dia hita fa mbola hiatrika kilasika hafa izy ireo amin'ny endrika Neil Gaiman's Coraline!
Iray amin'ireo sanganasa malaza indrindra an'ny mpanoratra, Coraline mitantara ny tantaran'ny tovovavy iray izay mamaky varavarana misitery ary mahita tontolo iray izay mifanohitra tanteraka amin'ny azy.
Avy amin'ny sary naseho ny Tweet an'i Gaiman etsy ambany, dia toa i Lisa no hanao io dia be io. Tsy azontsika an-tsaina fotsiny ny mihemotra an'i Bart, Homer, Marge ary Maggie miaraka amin'ny famirapiratanana mamirapiratra amin'ny mason'izy ireo!
Nankany amin'ny Twitter ny mpanoratra omaly vao namoaka ity sary manokana ity:
Ilay mason'ny voromahery eo aminao dia mety ho afaka manamboatra izay sarimihetsika na tantara mety hahazo ny Simpsons Halloween fitsaboana amin'ity taona ity. pic.twitter.com/PX7gergwuo
- Neil Gaiman (@neilhimelf) Septambra 21, 2017
Ity no volavolan-dalàna voalohany natrehintsika momba ny efa namboarin'i Treehouse of Horror tamin'ity taona ity ho antsika, saingy miverena mijery fa hamoaka vaovao misimisy momba ny fizarana Halloween farany vao mipoitra ny antsipiriany!
Ny vanim-potoana vaovao an'ny The Simpsons ' dia voatendry hisoratra anarana amin'ny 29 septambra 2017 satria manohy mametraka rakitsoratra ho an'ny andiany lava indrindra amin'ny fahita lavitra. Ity vanim-potoana ity dia manamarika ny # 29 ho an'ny seho an-tsehatra izay nanomboka ho andiana fohy amin'ny "The Tracey Ullman Show" tamin'ny taona 1980.
CoralineNeil Gaimantranon'ny hazo mahatsiravina
Heather Langenkamp niverina tamin'ny 'fahamarinana na fahasahiana'
Sary vaovao an'ny 'The Exorcist: Toko 2' Miorina amin'ny Internet